Umaki: yini | | Martech Zone
Iyini Inethiwekhi Yokulethwa Kokuqukethwe (CDN)?
Yize izintengo ziqhubeka ukwehla ekubanjweni nakumkhawulokudonsa, kusengabiza kakhulu ukusingatha iwebhusayithi kungxenyekazi yokubamba ye-premium. Futhi uma ungakhokhi kakhulu, kungenzeka ukuthi isayithi lakho lihle kancane - lilahlekelwa amanani akho abalulekile ebhizinisi. Njengoba ucabanga ngamaseva wakho abamba isiza sakho, kufanele abekezelele izicelo eziningi. Ezinye zalezo zicelo zingadinga ukuthi iseva yakho ixhumane nezinye
Asivame ukuxoxa ngokuphepha okuku-inthanethi noma i-Dark Web. Ngenkathi izinkampani zenze umsebenzi omuhle wokuvikela amanethiwekhi wazo angaphakathi, ukusebenza ekhaya kuvule amabhizinisi kwezinye izinsongo zokungenelwa nokugenca. Izinkampani ezingama-20% zathi zibhekene nokwephulwa kwezokuphepha ngenxa yesisebenzi esikude. Ukukhuthazela ekhaya: Umthelela we-COVID-19 kwezokuphepha kwebhizinisi I-cybersecurity ayiseyona nje umthwalo we-CTO. Njengoba ukuthembela kuyimali ebaluleke kakhulu ku-
Sekuyiminyaka ngicabanga ukuthi ukuba nehhovisi kuwukutshala imali okuhle… kwahlinzeka amaklayenti ami ngomqondo wokuthi ibhizinisi lami lizinzile futhi liyimpumelelo, kwanikeza abasebenzi bami nosonkontileka indawo ephakathi nendawo, futhi kwakuwumthombo wokuziqhenya kimi. Iqiniso ukuthi amaklayenti ami awazange avakashele ihhovisi futhi, njengoba nganginciphisa uhlu lwamakhasimende ami futhi ngandisa umphumela ngamunye, ngangisebenza kakhulu futhi